OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, 1966, bande 044, face B
Title: Fonds Denise Bernot, birman, 1966, bande 044, face B
Abstract: Cet enregistrement contient plusieurs dialogues en birman, qui sont des exercices de compréhension orale destinés aux étudiants de première et de troisième année de birman. Après chaque dialogue, les étudiants sont invités à répéter chaque phrase, qui sont à nouveau prononcées plus lentement et en laissant après chacune assez de temps pour permettre aux étudiants de répéter.
This recording consists ofaseries of dialogues in Burmese, which are listening tasks for first year and third year learners of Burmese language. After each dialogue, students are invited to repeat each sentence of the dialogue (they are pronounced again, slower and leaving enough time after each sentence for students to repeat).
ယ္ခုအသံသွင်းချက်တွင် ပထမနှစ်နှင့် တတိယနှစ် မြန်မာဘာသာစကားသင်ယူသူများနားထောင်နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် အပြန်အလှန်စကားပြောခန်းများ အတွဲလိုက်ပါဝင်သည်။ စကားပြောခန်းတခုပြီးလျှင် ကျောင်းသားများအား စကားပြောခန်းမှ ဝါကျတကြောင်းစီကို ထပ်မံရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ (ဝါကျများကို ပို၍နှေးကွေးစွာရွတ်ဆိုထားပြီး၊ ဝါကျတခုပြီးလျှင် ကျောင်းသားများ နောက်မှလိုက်၍ရွတ်ဆိုနိုင်ရန် အချိန်အလုံအလောက်ချန်ထားပေးသည်။)
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, 1966, tape 044, side B
Description: Le locuteur (U E Maung) annonce en français que c'est l'exercice pour les 1ére années ''La conversation téléphonique'' et invite les étudiants à écouter la conversation. Un dialogue s'ensuit entre U E Maung (appelé Than Thaik) et Ma Khin Mya Kyu (appelée Aye Chit) qui parlent de leur famille, de leur foyer (il yabeaucoup de grésillements), de leurs occupations (jusqu'à 2mn). Ensuite, le locuteur invite les étudiants à répéter et les phrases sont répétées une à une.(jusqu'à 10mn). Conversation birmane pour les 1ère années ''Au marché'' il faut d'abord écouter le texte. Dialogue entre un vendeur (U E Maung) et une acheteuse (Daw Khin Mya Kyu). Cette dernière achète du boeuf et marchande, puis se ravise et achète du porc, meilleur marché (jusqu'à 11mn). Ensuite, le locuteur invite les étudiants à répéter et les phrases sont répétées une à une. Deuxième partie ''Au magasin de légumes'' (à 16.21): La locutrice (Daw Khin Mya Kyu) achète des gombos, des oignons et des tomates, le vendeur lui propose d'autres produits. ''Au magasin de fruit'' (à 17.32mn): Elle achète des pommes-cannelle, des mangues, des prunes, des citrons. Le locuteur invite les étudiants à répéter phrase par phrase (de 18.20 à 25.13mn) Les 3ème années doivent ensuite écouter le texte suivant: un enseignant annonce aux étudiants qu'ils vont parler birman aujourd'hui et leur demande, en les appelant par leur nom birman, depuis combien de temps ils étudient le birman, combien il yade mois dans une année, de jours dans un mois, d'heures dans un jour, plusieurs questions se suivent ainsi, sur Paris, ses monuments (jusqu'à 28.24mn) puis les étudiants sont invités à répéter les phrases une à une. (jusqu'à 39.38mn). Deuxième partie à écouter: combien d'aéroport à Paris et leur nom, les transports pour y aller, les rues sont-elles étroites ou larges à Paris? sont-elles longues ou courtes? Les immeubles sont-ils hauts ou bas? ce qu'aiment les parisiens, les sports, le cinéma, demande quels sont leurs hobbies, la classe est finie (jusqu'à 43.45mn). Les étudiants sont ensuite invités à répéter phrase par phrase. (jusqu'à la fin).
The Burmese speaker (U E Maung) announces in French that this task “The conversation on the phone”, is for first year students, and invites students to listen to the conversation. A dialogue starts between U E Maung, featuring Than Thaik, and Ma Khin Mya Kyu, featuring Aye Chit. They talk about their family, their home (there isalot of background noise), their occupations (until2min.). Next, the speaker invites students to repeat and sentences are pronounced again slower and leaving enough time after each sentence for students to repeat (until 10 min.). Burmese conversation for First year students “At the market”; student are invited to listen to the conversation first. It isadialogue betweenaseller (U E Maung) andabuyer (Daw Khin Mya Kyu). This one wants to buy beef and bargains, then changes her mind and decides to buy some pork, which is cheaper (untile 11 min.). Then, the speaker invites students to repeat each sentence and pronounces them again one after the other. Second part “At the vegetable shop” (at 16.21 min.) : the speaker (Daw Khin Mya Kyu) is buying some lady fingers, onions, tomatoes, and the seller is suggesting other products. “At the fruit shop“ (at 17.32 min.) : She is buying some apple-cinnamon, mangoes, plums, and other products. Then the speaker invites students to repeat sentences one after the other (from 18.20 to 25.13 min). Third year have to listen to the following text :ateacher is telling his students that they will be speaking Burmese today and is asking them, calling them by their Burmese name, for how long they have studied Burmese, how many months there are inayear, how many days inamonth, how many hours inaday, and several questions follow regarding Paris and its monuments, (until 28.24 min.). Then, students are invited to repeat each sentence (until 39.38 min.) Second listening part: how many airports in Paris and their names; the transports to get there; are the streets narrower or larger in Paris ?; are they long or short ?; Are the buildings tall or low ?; about the likes of Parisians, about sports, cinema, hobbies ; the end of the class (until 43.45 min.). Students are then invited to repeat each sentence (until the end).
မြန်မာစကားပြောသူ ဦးအေးမောင်က ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် ယ္ခုသင်ခန်းစာ 'တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောဆိုခြင်း' သည် ပထမနှစ် ကျောင်းသားအတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ကျောင်းသားများအား စကားပြောခန်းကိုနားထောင်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဦးအေးမောင်က သန်းထိုက်အဖြစ်၊ မခင်မြကြူက အေးချစ်အဖြစ်ပြောဆို၍ စကားပြောခန်းတခုစတင်ကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏မိသားစုအကြောင်း၊ သူတို့၏အိမ် (အသံသွင်းမှုနောက်တွင်ဆူညံသံများစွာ ရှိသည်)နှင့် သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုပြောသည်။ (၂ မိနစ်ထိ)။ ထို့နောက် စကားပြောသူက ကျောင်း သားများကို လိုက်၍ရွတ်ဆိုရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ ထို့နောက် ဝါကျများကို နှေးကွေးစွာထပ်မံရွတ်ဆိုပြီး၊ ဝါကျတခုပြီးလျှင် ကျောင်းသားများနောက်မှလိုက်၍ရွတ်ဆိုနိုင်ရန် အချိန်အလုံအလောက်ချန်ထားပေးသည်။ (၁၀ မိနစ်ထိ)။ ပထမနှစ်ကျောင်းသားများအတွက် မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် 'စျေးထဲတွင်' ဟူသောစကားပြောခန်းတွင် ကျောင်းသားများအား ပထမဦးစွာ စကားပြောခန်းကို နားဆင်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည်။ စျေးရောင်းသူ(ဦးအေးမောင်)နှင့် စျေးဝယ်သူ(ဒေါ်ခင်မြကြူ)အကြား အပြန်အလှန်စကားပြောခန်းဖြစ်သည်။ ဝယ်သူက အမဲသားဝယ်လိုပြီး စျေးဆစ်သည်။ ထို့နောက် စိတ်ပြောင်းပြီး ပို၍စျေးသက်သာသော ဝက်သားဝယ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ ( ၁၁ မိနစ်အထိ)။ ထို့နောက်စကားပြောသူသည် ကျောင်းသားများအား ဝါကျတိုင်းကို တကြောင်းပြီးတကြောင်း လိုက်၍အသံထွက်ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ဒုတိယအပိုင်း 'ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုင်တွင်'(၁၆.၂၁ မိနစ်တွင်)၊ စကားပြောသူ ( ဒေါ်ခင်မြကြူ)သည် ရုံးပတီသီး၊ ကြက်သွန်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကိုဝယ်ယူနေပြီး ရောင်းသူကအခြားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်းဝယ်ယူရန်အကြံပြုနေသည်။ 'သစ်သီးဆိုင်တွင်'( ၁၇.၃၂ မိနစ်တွင်) သူမသည် ဩဇာသီး၊ သရက်သီး၊ ဇီးသီးနှင့် အခြားသောအသီးများကိုဝယ်နေသည်။ ထို့နောက်စကားပြောသူသည် ကျောင်းသားများအား ဝါကျများကို တကြောင်းပြီးတကြောင်းလိုက်၍အသံထွက် ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ( ၁၈.၂၀ မိနစ်မှ ၂၅.၁၃ မိနစ်ထိ) တတိယနှစ်ကျောင်းသားများသည် အောက်ပါသင်ခန်းစာကို နားဆင်ရမည်။ ဆရာတဦးသည် သူ၏ ကျောင်းသားများကို ယနေ့တွင်မြန်မာစကားကိုသာသုံး၍ စကားပြောဆိုကြရန်၊ သူတို့၏မြန်မာနာမည်များကိုခေါ်၍ မြန်မာဘာသာစကားကို အချိန်မည်မျှကြာကြာ လေ့လာထားပြီလဲ၊ တနှစ်တွင်ဘယ်နှစ်လရှိလဲ၊ တလတွင် ဘယ်နှစ်ရက်ရှိသလဲ၊ တရက်တွင်ဘယ်နှစ်နာရီရှိသလဲနှင့် ပဲရစ်နှင့် ၎င်းမြို့၏အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးများ အကြောင်း မေးခွန်းများစွာကို ဆက်လက်၍မေးမြန်းသည်။ (၂၈.၂၄ မိနစ်ထိ)။ ထို့နောက်ကျောင်းသားများကို ဝါကျအကြောင်းတိုင်းကို လိုက်၍ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ( ၃၉.၃၈ မိနစ်ထိ) ဒုတိယပိုင်းနားထောင်ခြင်း၊ ပဲရစ်မြို့မှမည်မျှသောလေဆိပ်များ နှင့် ၎င်းတို့၏အမည်များ၊ ပဲရစ်မြို့သို့ မည်သို့ရောက်ရှိနိုင်ပုံ၊ ပဲရစ်ရှိလမ်းများမှာ ပို၍ကျဉ်းသလား သို့မဟုတ် ပို၍ကျယ်သလား၊ လမ်းများရှည်လား သို့မဟုတ် တိုလား၊ အဆောက်အဦးများမြင့်လား သို့မဟုတ် နိမ့်လား၊ ပဲရစ်မြို့သားတို့၏ အကြိုက်များ၊ သူတို့၏အားကစားများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ဝါသနာများ၊ အတန်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်သည်။ ( ၄၃.၄၅ မိနစ်ထိ)။ ထို့နောက် ကျောင်းသားများကို ဝါကျတိုင်းကိုလိုက်၍ရွတ်ဆိုရန် ဖိတ်ခေါ်သည်။ ( အဆုံးအထိ)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1966_BUR_044_B
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-49b1c230-501e-3072-a401-cae54e451441
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1966-BUR-044-B.wav
Citation: Bernot, Denise (researcher); Candier, Aurore (consultant); Centre national de la recherche scientifique (sponsor); Institut national des langues et civilisations orientales (sponsor); Vittrant, Alice (depositor); Labex ASLAN (CNRS, ENS, Université Lumière Lyon 2) (sponsor); Khin Khin Zaw (consultant); Thandar Oo (consultant). 1966. Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale.